Ikhaya Amasu we Forex Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy
Namuhla, ukuhweba kubonakala kuhlukaniswe amakamu amabili, labo abahweba ngezinkomba kanye nalabo abahweba ngamaphethini entengo noma amaphethini amakhandlela. Zombili izinhlangothi zikholelwa ukuthi indlela yazo iyona engcono kakhulu. Abanye baze bakholelwe ukuthi indlela yabo iwukuphela kwendlela yokuhweba ngezimakethe ngenzuzo.
Ngakolunye uhlangothi, sinabahwebi abasebenzisa izinkomba zobuchwepheshe. Laba bahwebi bakholelwa ukuthi ukuhweba ngezinkomba zobuchwepheshe kunikeza ukucaca okunzima kakhulu kubadayisi abaningi. Ibavumela ukuthi babone izinto abebengeke bazibone ukube bebehweba ngeshadi elinqunu. Futhi yengeza kuyo inzuzo yokuhlinzeka ngemigomo esekelwe kwizibalo yokuthatha uhwebo. Lokhu kuvumela abadayisi ukuthi bahlunge ukuhweba okungadluli izindinganiso ezibekwe umhwebi. Kususa ukuthathwa kwezinqumo ezivumayo okungenwa ukuhaha nokwesaba. Iphinde ivumele abathengisi ukuthi bahwebe nge-algorithmically, ukuthatha ukuhweba kuphela uma isethi yemibandela iye yahlangatshezwana nayo kusetshenziswa izinkomba zobuchwepheshe.
Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum kukhona abadayisi beshadi abanqunu. Laba bahwebi bakholelwa ukuthi izinkomba zobuchwepheshe zisalele ngakho-ke zikhiqiza imiphumela emibi kuneshadi elinqunu. Bakholelwa ukuthi yonke into ingabonwa eshadini elinqunu futhi intengo yikho konke okudingayo ukuze wenze uhwebo. Laba bahwebi bahweba ngamaphethini ekhandlela, isinyathelo intengo, shwiba phezulu bese ushwiba amaphethini aphansi, ukwesekwa nokuphikiswa nokunye okunjalo.
Nakuba abathengisi abaningi behweba ngokusekelwe kunoma iyiphi indlela, kunezindlela zokuhlanganisa zombili izindlela. Abahwebi babengahweba ngokusekelwe esenzweni samanani kanye nezinkomba zobuchwepheshe. I-Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy ihlinzeka ngezimpawu zokuhweba ezisuselwe ekuhlanganeni kwezimpawu zezinkomba zobuchwepheshe kanye nesenzo senani..
2 Isilinganiso Esinyakazayo Esingunxantathu
4.3 Indlela yokufaka i-Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy?
I-Oscillator Eyesabekayo (UKUZE) inkomba yobuchwepheshe elandela ithrendi. Kuyinkomba e-oscillating esetshenziselwa ukukala umfutho wemakethe.
Ikala umfutho wemakethe ngokwenza ikhompuyutha umehluko phakathi kwama-avareji amabili anyakazayo. Izilinganiso ezihambayo ezijwayelekile ezisetshenziswa i-Awesome Oscillator iyi-5-period Simple Moving Average (Isikolo sebanga eliphezulu) kanye nesilinganiso se-Moving average esingu-34-elula (Isikolo sebanga eliphezulu).
Ibonisa umehluko njengamabha ama-histograms. Amabha amahle akhombisa inkambiso ye-bullish ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa inkambiso ye-bearish. Imigoqo eluhlaza okotshani ikhombisa ukuthambekela kwe-bullish okuqinisayo, kuyilapho amabha abomvu abonisa ukuthambekela okubuthakathaka kwe-bullish. Ngokwesinye isandla, imigoqo ebomvu engalungile ikhombisa ukuthambekela kwe-bearish okuqinisayo, kuyilapho amabha abomvu angemahle abonisa ukuthambekela kwe-bearish eba buthaka.
I-Awesome Oscillator ngokuvamile isetshenziselwa ukuqinisekisa ukuqondiswa kwethrendi noma ukulindela ukuhlehla kwethrendi okungaba khona. Ukuhweba kungase kuhlungwe ngokusekelwe ekuqondisweni kwethrendi ngokuhlonza ukuthi imigoqo ilungile noma imbi. Ukuhlehla kwethrendi okungaba khona kungabonakala ngokweqa amabha ukusuka kokunegethivu kuye kokuphozithivu noma okuphambene nalokho..
Isilinganiso Esinyakazayo Esingunxantathu
Isilinganiso Esinyakazayo Esikanxantathu (TMA) inguqulo eguquliwe yesilinganiso esihambayo. Njengamanani amaningi ahambayo, iphinde ikhombise isiqondiso sethrendi ngokuhlonza isilinganiso senani ngaphezu kwenani elishiwo lamaphoyinti edatha. Noma kunjalo, ihluke kakhulu uma iqhathaniswa nezilinganiso eziningi ezihambayo ngoba ishelela kakhulu uma iqhathaniswa nezinye izinguqulo zesilinganiso esinyakazayo.
I-TMA yathuthukiswa ukuze kwakheke umugqa ohambayo oshelelayo. Lokhu ikwenza ngokwesilinganiso sentengo kabili. Ngenkathi i-Simple Moving Average evamile (Isikolo sebanga eliphezulu) isilinganiso esilula sokuvalwa kwentengo inombolo ethile yezikhathi, I-TMA ilinganisa Izilinganiso Ezinyakazayo Ezilula ezimbalwa ukuze kusheleleke umugqa omaphakathi onyakazayo ngokuqhubekayo. Lokhu kudala umugqa omaphakathi ohambayo oshelela kakhulu, okungase kube sengozini yokungenwa ama-spikes kanye nokuntengantenga kwezimakethe nokho kungase kubambezeleke.
Lelisu lokuhweba liyisu elilula lokuhweba elihlinzeka ngezimpawu zokuhweba ezisuselwe ku-crossover ye-Exponential Moving Average. (UMAMA) umugqa kanye nolayini we-TMA, okuyinto ehambisana nesiginali yokuguqulwa kwethrendi evela ku-Awesome Oscillator futhi iqinisekiswa isenzo senani.
Okokuqala, umugqa we-EMA (igolide) kufanele weqe umugqa we-TMA (green). Lokhu kuzobonisa ukuguqulwa kwethrendi okungenzeka.
Olandelayo, i-Awesome Oscillator kufanele iqinisekise ukuhlehla kwethrendi. Lokhu kusekelwe ekweqeni imigoqo yayo ukusuka kokunegethivu kuye kokuphozithivu noma okuphambene nalokho.
Okokugcina, isenzo senani kufanele siqinisekise ukuhlehla kwethrendi. Lapho uwela imigqa emibili emaphakathi enyakazayo, amakhandlela amanani ku-crossover kufanele abe nezintambo eziphusha umugqa we-TMA. Lokhu kungasho ukuthi ukuhlehliswa kwentengo kuya emugqeni we-TMA kuphela ukuwenqaba ngemva kwalokho. Bese, umfutho noma ikhandlela elivuthayo kufanele livele liqinisekisa ukuhlehla komkhuba.
Awesome (izilungiselelo ezizenzakalelayo)
Umugqa we-EMA (igolide) kufanele iwele ngaphezu komugqa we-TMA (green).
Amabha we-Awesome Oscillator kufanele awele ngaphezu kweziro.
Isenzo senani kufanele sibonise izimpawu zokwenqaba ulayini we-TMA.
Umfutho we-bullish noma ukugcwala kufanele kwenzeke.
Faka i-oda lokuthenga ngemva kokuqinisekiswa kwemibandela engenhla.
Setha ukulahleka kokumisa ngaphansi komugqa we-TMA.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa we-EMA uwela ngaphansi komugqa we-TMA.
Umugqa we-EMA (igolide) kufanele yeqe ngezansi komugqa we-TMA (green).
Amabha we-Awesome Oscillator kufanele awele ngaphansi kweziro.
Umfutho we-bearish noma ukugcwala kufanele kwenzeke.
Faka i-oda lokuthengisa ngemuva kokuqinisekiswa kwemibandela engenhla.
Setha ukulahleka kokumisa ngaphezu komugqa we-TMA.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa we-EMA uwela ngaphezu komugqa we-TMA.
Amasu e-Crossover, lapho isetshenziswa njengesignali ezimele ingaba hit noma miss. Kwesinye isikhathi kuzoletha izinzuzo ezinhle ekusetheni kokungena. Kwezinye izimo, izohlehla ngokushesha ngemva kwe-crossover. Yingakho amasu e-crossover kufanele aqinisekiswe ngokuhlangana okuvela kwezinye izinkomba. Yilapho i-Awesome Oscillator ingena khona.
Phezu kwalokhu, futhi sifuna iziqinisekiso ezisuselwe esenzweni senani. Ukuhlola kabusha nokwenqatshwa kuyizinkomba zesenzo senani eziyisisekelo abadayisi abaningi abazibhekayo lapho bengena kwezohwebo.
I-Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy iyinhlanganisela ye-Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela yokufaka i-Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy?
Landa i-Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy.zip
Hamba kwesokudla ukuze ukhethe I-Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy
Uzobona Precision Triangulated Crossover Forex Trading Strategy iyatholakala eshadini lakho
Isiqephu esedluleInkomba ye-TDS Global MT5
Isihloko esilandelayoI-XFisher org v1 Inkomba ye-Vol Supr Zer Alert MT5